Tafura yeKuwanza Huwandu - Wikipedia
Tafura yeKuwanza Huwandu
(Redirected from Tebhuru yeBamhamberengi)
Muchidzidzo masvomhu, Tafura yeKuwanza Huwandu (Multiplication Tables or Times Tables ) zvinoreva tafura inoshandiswa pa[.kuwanza. Kuruboshe kwetafura iyi ndiko kune mberengi, kumusoro kwetafura kune nhamba dzinotaura kuti mberengi iri kuungwa kechingani. PaMuravanegumi, Tafura yeKuwanza Huwandu inoonekwa sehwaro pachidzidzo chemasvomhu. Vadzidzisi vazhinji vanerudaviro rwekuti zvakakosha kuti vadzidzi vange vachiziva Tafura yeKuwanza Huwandu nemusoro kusvika pana 12 x 12.
Tafura iri pasi apo inosvika pana 20 x 20. MuZimbabwe vadzidzisi vazhinji vanodzidzisa vanoda kuti vana vazive kusvika pana 12 x 12.
Panoitwa Tafura yeKuwanza Huwandu, (multiplication table) sezviri pamufananidzo uri pamusoro, kune nhamba inoverengwa nayo inonzi mberengi, n. Kuruboshwe kwetafura zvichidzika ndiko kune mberengi, pamusoro petafura kubva kuruboshwe zvichienda kurudyi ndipo panoverengwa kuwanzwa kwemberengi.
Kana mberengi yadanwa kamwe, zvakafanana nokuti n x 1.
Kana mberengi yapamha kudanwa kagumi izvi zvakafanana nokuti n x 10 zvichingodaro.
Kana mberengi yapamha kudanwa kechi makumi maviri, zvakafanana nokuti n x 20.
Zvakafanira tiwonesane kuti pana n x 20, kana makumi maviri iriyo mberengi n ndiko kuverengwa kwekuti mberengi yadanwa kechingani. Saka nhamba dzose dziri mbiri dzinogonha kuva mberengi.
Murume wekuGreece ainzi Pythagoras aiva godobori remasvomhu, akanyora Tafura yeKuwanza Huwandu iri kutaridzwa pamufananidzo uri pano.
Mugore 1820, godobori remasvomhu John Leslie akadhindisa bhuku rainzi The Philosophy of Arithimetic iro raiva nebamhamberengi ya 99 kusvika pana 99 x 99. John Leslie aikurudzira vadzidzi vake kuti vazive Tafura yeKuwanza Huwandu nemusoro kusvika pana 25 x 25.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Tafura_yeKuwanza_Huwandu&oldid=44547"
This page was last edited on 20 Zvita 2015, at 22:41.